‘फिल्म खेल्न गर्भपतन गराएँ’ ‘छोरी’ भन्ने सुन्नेबित्तिकै त्यसबेला लागेको खिन्नताप्रति छोरी कवितासँग यही स्तम्भमार्फत क्षमा चाहन्छु– करिश्मा मानन्धर
सिर्जना दुवाल श्रेष्ठ बिहीबार, साउन १५, २०७७
मेरो बिहे विनोद मानन्धरसँग १८ वर्षमा भयो । भर्खरै चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी थिएँ । सही–गलत छुट्याउन सक्ने पनि भइसकेकी थिइनँ । त्यसैले चलचित्र क्षेत्रमा अभिभावक आवश्यक पर्ने महसुस गरेर विनोदजीसँग बिहे गरेकी हुँ ।
विहे गरेपछि पहिलो पटक दुई महिना लगातार महिनावारी रोकियो । ठूलै रोग पो लाग्यो कि भनेर आत्तिएँ । जँचाउन अस्पताल गयौं । परीक्षणपछि डाक्टरले भने, ‘तपाईंलाई बधाई छ । आमा बन्दै हुनुहुन्छ ।’
डाक्टरको कुराले म आत्तिएँ । मैले अनुमान पनि गरेकी थिइनँ कि, गर्भवती भएँ हुँला भनेर । विनोदजी पनि तनावमा पर्नुभयो । किनकि हामी बच्चा जन्माउने मनस्थितिमा थिएनौं । बच्चा जन्माउनका लागि मेरो शरीर कच्चा नै थियो, करिअरको हिसाबले पनि बच्चा जन्माइहाल्नु गलत हुने विनोदजीको मत थियो । त्यसैले उहाँले गर्भपतन गराउन सुझाव दिनु भयो ।
मैले ‘एक–दुई दिन सोचेर मात्रै जवाफ दिन्छु’ भनेँ । गर्भमा बच्चा छ भन्ने सुनेपछि ममा मातृत्व जागेको थियो । गर्भपतन गराउने कुराले रातभर निदाउन सकिनँ । जतिबेला पनि आँखा रसाइरहन्थ्यो । विनोदजीले नदेख्ने गरी ठूलो आवाज निकालेर रोएँ, नसुन्ने गरी त कति रोएँ, रोएँ ।
त्यही बेला भुवन केसीले ‘सपना’ चलचित्रका लागि ‘अफर’ लिएर आउनुभयो र काम गर्न निकै अनुरोध गर्नुभयो । उहाँलाई म गर्भवती छु भन्ने थाहा थिएन । कुरा चल्दै गर्दा विनोदजीले भुवन दाइको प्रस्ताव स्विकार्नुभयो । त्यतिबेला म यति दोधारमा थिएँ कि, करिअर रोजौं कि बच्चा ! यसबारे विनोदजी र मबीच धेरै छलफल भयो । मैले पनि धेरै नै सोचें । र, मन नलागी–नलागी गर्भपतन गराउने निष्कर्षमा पुगें । गर्भपतन गराएँ पनि । तर, आँसु रोकिएन । त्यो कुरा सम्झँदा अहिले पनि पीडा हुन्छ ।
त्यही बेला भुवन केसीले ‘सपना’ चलचित्रका लागि ‘अफर’ लिएर आउनुभयो र काम गर्न निकै अनुरोध गर्नुभयो । उहाँलाई म गर्भवती छु भन्ने थाहा थिएन । त्यतिबेला म यति दोधारमा थिएँ कि, करिअर रोजौं कि बच्चा !
त्यसपछि पनि हामीले परिवार नियोजनका कुनै पनि साधन प्रयोग गरेनौं । पहिलो गर्भपतन गराएको तीन वर्षपछि फेरि महिनावारी रोकियो । त्यतिबेला २१ वर्षकी थिएँ, पहिले जस्तो डर पनि लागेन । हामी अस्पताल गयौं । डाक्टरले उसैगरी बधाई दिए । मलाई औधी खुसी लाग्यो । पहिलो गर्भ नै पतन गराएका कारण फेरि सन्तान नहुने पो हो कि भन्ने चिन्ता थियो । चिन्ता मेटियो ।
त्यसपछि सम्झौता गरेका चलचित्र पनि रद्द गरें । नौ महिना पूरै आराम गरें । अन्तरजातीय बिहे भएकाले सासूआमाले मलाई स्विकार्नु भएको थिएन । आमाले नै मेरो हेरचाह र स्याहार–सुसार गर्नुभयो । सुत्केरी हुने समय आउनै लाग्दा कामको सिलसिलामा विनोदजी बेलायत जानुपर्ने भयो, जानुभयो । डाक्टरले डेट दिएको अघिल्लो दिन उहाँ नेपाल आउने कुरा थियो । मेरो मनले उहाँलाई खोजिरहेको थियो । तर, उहाँ मसँग हुनुहुन्त्थ्यो । त्यो कुराले पीडा हुन्थ्यो ।
डेलिभरी हुने अघिल्लो दिन म महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा गएर भर्ना भएँ । डेलिभरीका लागि अस्पताल भर्ना भएसँगै मेरो मनमा जिज्ञासामिश्रित डर भरियो । मुटुको धड्कन बढ्यो । मेरो वार्ड ग्राउन्ड फ्लोरमा थियो । झ्यालमा पनि बार थिएन । एकदम डर लाग्यो । श्रीमानको अभाव अनुभूति भयो । मसित आमा हुनुहुन्थ्यो । तर, त्यस्तो बेला श्रीमान् भएजस्तो नहुने रहेछ ।
श्रीमानको अभाव अनुभूति भयो । मसित आमा हुनुहुन्थ्यो । तर, त्यस्तो बेला श्रीमान् भएजस्तो नहुने रहेछ ।
मलाई यतिधेरै छटपटी भयो कि, खप्नै सकिनँ । अनि आमा ट्वाइलेट जानु भएको मौका पारेर झ्यालबाट हाम फालेँ र घर गएँ । विनोदजी घर आइपुग्नु भएको रहेछ । उहाँले फेरि अस्पताल पुर्‍याउनुभयो । आमाले त म अस्पतालबाट भागेकै पत्तो पाउनुभएन ।
दोस्रो गर्भ बसेपछि नौ महिना खासै गाह्रो भएको थिएन । वाकवाकी लाग्ने, रिँगटा लाग्ने केही भएको थिएन । उतिसारो ढाडपेट पनि दुखेन । त्यतिबेला सालिफा खुब खाएँ ।
अस्पताल भर्ना भएको भोलिपल्टदेखि पानी बग्न थाल्यो । त्यसपछि मलाई लेबर रुममा लगियो । त्यहाँ पुगेपछि मलाई खास प्रसवपीडाको अनुभूति भयो । अरु महिलाहरू छटपटाइरहेका थिए, चिच्याई–चिच्याई रोइरहेका थिए । म भने रोइनँ । तर श्रीमान् सँगै भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो । तर त्यतिबेला विनोदजी घरमै बस्नुभयो । मैले डाक्टरलाई उहाँसित टेलिफोन सम्पर्क गराइदिन आग्रह गरें । फोन लगाइदिनुभयो । तर केही बोल्नै सकिनँ । भकानो फुट्ला जस्तो भयो । यति भनें, ‘सारै सुप पिउन मन लाग्यो, ल्याइदिनुस् न !’
मलाई सूप पिउनुभन्दा पनि बच्चा जन्मनुअघि श्रीमानको अनुहार हेर्नु थियो । तर उहाँ आउनु भएन । उहाँको अभावबीच नै मैले पहिलो सन्तान कवितालाई जन्म दिएँ । राति पौने दश बजे हाम्रो शरीर छुट्टियो । आफ्नो बच्चाले पहिलोपटक रोएको आवाज सुन्दा व्यक्त गर्नै नमिल्ने प्रकारको अनुभूति हुँदो रहेछ ।
बच्चा जन्मनेबित्तिकै मैले डाक्टरलाई ‘छोरा कि छोरी ?’ भनेर सोधेछु । ‘छोरी’ भन्ने सुन्नेबित्तिकै मनमा खिन्न लाग्यो । त्यो बेलाको सोच सम्झेर अहिले आफैंलाई ग्लानि हुन्छ । त्यो खिन्नताप्रति छोरी कवितासँग नेपाली पब्लिकको यहीं स्तम्भमार्फत क्षमा चाहन्छु । अहिले, छोरीको जन्मलाई दुखाइपछिको आनन्दका रूपमा लिएकी छु । हो, आमा भएपछि अर्को जन्म भएको अनुभूति भयो । मलाई गर्व छ, कविताजस्ती छोरीकी आमा हुनुप्रति ।
छोरी जन्मिएको दुई वर्षसम्म पनि मैले कुनै प्रोजेक्टमा काम गरिनँ । र, कविताको जन्मपछि नै मैले विनोदजीको घरमा भित्रिन पाएँ । त्यसपछि उहाँकाे परिवार पनि खुसी हुनुभयो ।
प्रसवपीडाभन्दा मातृत्वको अनुभव मीठो हुँदो रहेछ । साँच्चै, एउटी महिला आमा बनेपछि मात्रै पूर्ण हुने रहेछ !
(नेपाली पब्लिकका लागि सिर्जना दुवालले गरेको कुराकानीमा आधारित)
अन्य पब्लिक स्टोरी:
मीठो खीरको रमाइलो कथा